Onyinye Social na ndepụta nke ịchọrọ | Martech Zone
Otu omume na azụmaahịa ecommerce nke na-abata bụ ikike iji aka na-azụta onyinye. Mgbe anyị na-eme ya site na ọrụ ebere, ugbu a ị nwere ike ịnakọta ọnụ na ndị enyi wee bulie ego iji zụta onyinye dị oke ọnụ karịa maka enyi. Ọ bụ nnukwu echiche na nke ga-eme ka ịzụrụ ihe na ntanetị buru ibu. Ntughari bụ ngwa dị otú a:
A whopping $ 244 ebu, na nke ahụ bụ nkezi na-eri nke n'elu onyinye si 2000 ka 2011. ezumike, ngụsị akwụkwọ, agbamakwụkwọ: ya niile na-agbakwụnye. Ego ole ka ị na-ajụ? Inyocha akwụkwọ ozi a, ị ga - ahụ na ọnụ ahịa na - aga n’ihu n’elu igwe na igwe eletrọniki dị ka onyinye a na - achọkarị gụnyere smart ekwentị, mbadamba na ndị na - agụ akwụkwọ, na - agụta ihe ruru $ 800 na 2011 maka kwa afọ. Ma, ọ bụrụ na ị bụ nne na nna nwere ọtụtụ ụmụaka ị na-eche nnukwu ọrụ ihu. Ọ bụ ihe dị anya site na Teenage Mutant Ninja Turtles, WWF na-eme atụmatụ na pogs - naanị nwee nlegharị anya na ụlọ ahịa ọ bụla - afọ ole ka ụmụ 5 ga-ahụ na iPads na Leap Frog?
Nke a bụ ihe infographic si Countmein na Social Gifting and Wish Lists:
Tags: gụọmmekọrịta mmadụ na ibe yaanatara ndepụta